Exynos 980: processor Samsung oo leh 5G isku dhafan | Androidsis
Exynos 980: processor-kii ugu horreeyay ee Samsung oo leh 5G isku-dhafan
Bil ka hor Samsung waxay soo bandhigtay processor-keeda cusub ee dhamaadka-sare, oo ku jira Galaxy Note 10, Exynos 9825. Shirkadda Kuuriya waxay hadda cusbooneysiineysaa noocyada kala duwan ee processor-radeeda, iyadoo moodal loogu yeeray inuu yeesho muhiimad weyn. Tan iyo saxiixa waxaan wuxuu la baxayaa processor-kiisa ugu horreeya oo leh 5G isku dhafan. Tani waa Exynos 980, oo horeyba rasmi u ahayd.
Noocyadan kala duwan ee ka shaqeeya Samsung ayaa qaabkan lagu xoojiyay iyada oo si weyn loo bilaabay. Exynos 980 waa processor-kii ugu horreeyay ee lahaansho lahaada 5G, marka lagu daro la imaanshaha taxane horumarineed oo muhiim ah sida soo saaraha Kuuriya horayba ugu muujiyay soo bandhigidiisa. Waqti muhiim u ah shirkadda.
Processor-kani waa isbeddelkii 9820-kii, kaas oo ku jira Galaxy S10. Exynos 980 wuxuu isku daraa burooyin kala duwan si loo bixiyo adeegsiga awooda hoose, iyo sidoo kale inuu noqdo processor awood leh, oo leh joogitaan badan oo caqli macmal ah oo u taagan joogitaanka 5G. Waxay ku timid modem 5G ah oo lagu dhisay processor-ka laftiisa. Waad ku mahadsan tahay, iskuxirka ka yimaada Edge 2G iyo shabakadaha 5G waa la awoodsiin karaa.
1 Sooc Exynos 980
2 Goorma ayaa la sii deyn doonaa?
Sooc Exynos 980
Samsung horay ayey ula wadaagtay faahfaahinta muhiimka ah ee ku saabsan processor-kan cusub. Marka waxaan horeyba u ogaan karnaa waxa laga filayo arimahan. Exynos 980 wuxuu awood u leeyahay inuu ku xirmo shabakadaha 5G ee ka hooseeya 6 Ghz. Waxay kaloo na siisaa a 2,55 Gbps xawaaraha ugu badan ee soo dejinta.
Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah inay la timaaddo isku xirnaanta Dual E-UTRA-NR. Waa wax walba oo ku saabsan iswaafajinta shabakadda, taas oo ay suurtogal ka dhigtay isku darka 4G LTE 2CC iyo 5G. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in processor-kani uu lahaan doono taageero taxane ah shabakadaha WiFi 6. Kuwa ugu dhameystiran arrintan, sidaan arki karno. Samsung ayaa shaaca ka qaaday qeexitaankiisa, Waa kuwee kuwa soo socda:
processor: 2 Cortex-A77 cores oo lagu qiyaasay 2,2 GHz iyo 6 Cortex-A55 oo ah 1,8 GHz.
Isku-darka NPU (Qaybta Nidaamka Neerarka)
Nidaamka been-abuurka: 8nm LPP FinFET
Kaydinta: UFS 2.1, eMMC 5.1
Modem: 5G Sub 6, 5G LTE EN-DC, LTE Qeybta 16, LTE Qeybta 18
Muuqaal: 108 Taageerada MP ee isku xirnaanta kamaradaha hal qaabeynta laba jibbaar 20 + 20 MP taageero
Muujin istaag: 3360 × 1440 pixel WQHD +
Duubista fiidiyaha: Duubista xalka 4K ee fps 120
Daawashada tilmaamahaaga, waxay u muuqataa in Samsung aysan u adeegsan doonin dhexdeeda. Marka joogitaanka Exynos 980 ee kala duwanaanta Galaxy S iyo Galaxy Note ama taleefannadiisa isku laaban, oo sidoo kale noqon doona moodello ka mid ah kuwa ugu sarreeya, ayaa meesha laga saaray. Marka waxay leedahay meel kale oo loo socdo.
Goorma ayaa la sii deyn doonaa?
Samsung waxba kama aysan sheegin bilowga xilligan laga bilaabo Exynos 980 ilaa suuqa. Waxba lagama oga waxa ku saabsan taleefannada ay noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee noocyadooda kala duwan ee adeegsada. Inkasta oo sidaan kor ku soo sheegnay, ay u muuqato inaysan noqon doonin dhammaadkeeda sare ee ka faa'iideysanaya.
Waa layaabaa inay noqon karto moodello dhex-dhexaad ah oo ka faa'iideysanaya. Samsung ayaa shalay naga tagtay leh Galaxy A90 5G, Moodelkeedii ugu horreeyay ee heer-dhexaad ah oo taageeraya 5G. In ka badan hal munaasabad shirkaddu waxay muujisay xiisaha ay u leedahay inay maamusho qaybtan suuqan. Sidaa darteed, waxay leeyihiin qorshayaal ay ku bilaabayaan sida ugu dhakhsaha badan moodooyinka dhex-dhexaadka ah inay heli doonaan taageero 5G. Processor-kan wuxuu noqon lahaa caawinaad fiican howshaas.
Sidaa darteed, ma ahan wax aan caadi ahayn in taleefannada Samsung ay dhex-dhexaad ama heer dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo isticmaala Exynos 2020 ay ku yimaadaan 980. Shirkaddu waxay u socotaa bilow wax soo saarka processor sanadkaan gudihiisa, sida ay horayba u xaqiijiyeen. Marka 2020 taleefannada ugu horreeya ee adeegsada waa inay yimaadaan dukaamada. Waxaan rajeyneynaa inaan kaa maqalno bilaha soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Exynos 980: processor-kii ugu horreeyay ee Samsung oo leh 5G isku-dhafan
Google ayaa dhawaan bilaabi doonta barnaamij cusub "Android Auto ee shaashadaha moobilka"
OnePlus 7T wuxuu socod ku maray Geekbench si loo raadiyo qaar ka mid ah qeexitaankiisa